Uyilo lweBitCAD -Geofumadas
Ndicinga ukuba ukuthengiswa kwe-BitCAD, ye-IntelliCAD, ehamba ngendlela yindleko ephantsi kwi-AutoCAD njengoko ndathetha nawe kwithuba elidlulileyo xa senze uhlolo olubanzi yale nkqubo.
Inika isifundo esihle kwiSebe lokuthengisa zeMpawu ihehe
Kwaye njengoko ndibathanda, ndiza kubazisa esidlangalaleni ... mhlawumbi ngenye imini bayandikhumbula. Nantsi eminye imizekelo.
Ukongezelela ekudaleni umkhankaso, ubhekisela kwizixhobo ezine eziphambili:
Ifomathi, I-DWG yesiThili (bayitsho), kwanezela kwii-AutoCAD ze-2009 iinguqulelo
Inkxaso, oku kukuthi i-mara mara ikhononda ukuba iinkampani ezinkulu azixhaseli abathengi abancinci
Ukufana ne-AutoCAD, imiyalelo emininzi isebenza ngokufanayo, kuquka ii-AutoLISP, ADS kunye ne-DCL.
Ixabiso, sesona sixhobo sakhe someleleyo ... amaxesha ali-10 asezantsi. Lo mbandela utyunyuzwa nzima, ngokunxibelelene nendalo esiva ubunzima bezoqoqosho.
Indlela yokulayisha i-kml kwiGoogle Maps
I-Google Street View ifika eGuadalajara
ULuis Villanueva uthi:
Ndiyakholwa ukuba into ebaluleke kakhulu ayigxininisi, kwaye ukuba ngaphaya kokuhambelana ne-AutoCAD, inkxaso ye-.DWG ye-IntelliCAD Consortium yenza ihambelane nenani lezicelo ze-CAD eziqhelekileyo. Ndiyakholelwa ukuba ukuba i-IntelliCAD yahlasela i-shishini yayiza kuba yinkqubo ye-intersante yokuveliswa kwemarike yesofthiwe kwi-CAD.